Iska hor-imaad ka dhacay Afgooye & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Iska hor-imaad ka dhacay Afgooye & Wararkii ugu dambeeyay
Iska hor-imaad ka dhacay Afgooye & Wararkii ugu dambeeyay
Afgooye (Halqaran.com) – Iska hor-imaad khasaare gaystay ayaa duhurnimadii maanta ka dhacay afaafka hore ee Saldhiga Booliska Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Iska horimaadka ayaa u dhaxeeyay Ciidamada Booliska ee Degmada Afgooye iyo Ciidamada Militariga ee Dowladda Federaalka.
Iska horimaadkan ayaa yimid, ka dib markii Ciidamada Militariga ay ku duuleen Saldhiga Afgooye, oo lagu soo xiray laba askari, oo falal burcadnimo lagu eedeeyay.
Wararka ayaa sheegaya in iska horimaadkaasi uu ku dhintay hal askari, halka mid kalena uu ku dhaawacmay, kuwaa oo ka tirsanaa Ciidamadii Militariga ee weerarka soo qaaday.
Taliyaha Saldhiga Booliska ee Degmada Afgooye Dhamme Cabdiqaadir Mursal Nuunow, ayaa sheegay in weerarka Ciidamada Militariga uu yimid, ka dib markii ay xabsiga soo dhigeen laba ka mida Ciidamada Militariga, oo uu ku eedeeyay inay xalay dhac u gaysteen gaari rakaab.
Taliyaha oo Warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in Ciidamada Militariga ay ku guuldareysteen inay xabsiga xoog kaga soo sii daayaan labadaasi askari, oo sida uu sheegay weli xiran.
Cabdullaahi Bakar Yarow oo ka mid ah dadka reer Afgooye ayaa sheegay in iska horimaadka uu inta muddo ahba u dhaxeeyay Ciidamada Dowladda ka wada tirsan
Cabdullaahi Bakar oo la hadlay warbaahinta ayaa sidoo kale sheegay in iska horimaadkaasi uu walaac ku abuuray dadka deegaanka, inkastoo aan la soo sheegin dad rayid ah oo wax ku noqday.
Ugu dambeyn, Cabdullaahi Bakar Yarow ayaa xusay inay xaaladda degmada ku soo laabatay sideedii hore, ka dib markii ay dib u gurteen Ciidamadii Militariga, ee ka soo duulay duleedka Degmada Afgooye.
Iska horimaad ka dhacay Saldhiga Degmada Afgooye & Wararkii ugu dambeeyay